လူသေပေမယ့် နာမည်မသေသွားတဲ့ လူမသိသူမသိ သူရဲကောင်း ဗိုလ်ကြီး ပြည့်ဖြိုးစံ – XB Media Myanmar
လူသေပေမယ့် နာမည်မသေသွားတဲ့ လူမသိသူမသိ သူရဲကောင်း ဗိုလ်ကြီး ပြည့်ဖြိုးစံ
လူသေပေမယ့်…နာမည်မသေတဲ့ လူမသိသူမသိ သူရဲကောင်းလေး ဗိုလ်ကြီး ပြည့်ဖြိုးစံ..
သာလွန်အင်အားနဲ့ သောင်းကျန်းသူတွေကို ရင်ဆိုင် တိုက်ခိုက်ရင်း ရဲမေတွေ စစ်သည် တွေကို ရအောင်ကယ်ထုတ်ရာက ၂၉.၁၀.၂၀၁၅ မှာ ကျဆုံးလေပြီးသော အာဇာနည် စာရ င်း ဝင်သွားတဲ့ ဗိုလ်စံ…”စစ်ကိုမုန်း၍ တိုက်ခဲ့သည်” ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားမှာ သရုပ်ဆောင် နေမင်းက ဗိုလ်စံ အဖြစ် ပြန်လည်အသက်သွင်းခဲ့ပြီ…
ရုပ်ရှင်အဖြစ် အသက်သွင်းလာတော့လည်း ဂုဏ်ယူရင်း မျက်ရည်ဝဲကြရဦးမှာပေါ့ …လူ သေေ ပမယ့်…နာမည်မသေတဲ့သူရဲကောင်းကြီးတွေ…ကောင်းရာဘုံဘဝ ရောက်ကြ မှာပါ လေ….မကြာမီတွေ့မြင်ရတော့မည့် “စစ်ကိုမုန်း၍တိုက်ခဲ့သည်” ဇာတ်ကားမှာ ဖြစ်ရ ပ်မှ န်ကို ပြန်လည်ရိုက်ကူး၍မြင်ရပါဦးမည်” သူရဲကောင်းများမွေးဖွားသည် ”” ဗိုလ်မှူးသိလား ! ဝိန်းကောင်မှာ အင်အား ၆၀၀ကျော်နဲ့လာဝိုင်း ကျွန်တော်နဲ့ ဆေးအဖွဲ့ပိတ်မိနေတော့ ၅၀က ညီလေး ပြည့်ဖြိုးစံ ( ဗိုလ်စံ ) အတင်းစစ်ကူလိုက်တယ်…
အိုငကှှနကှနေ သတငှးကှားတော့ ညီလေး မလာနဲ့ အနတှရာယမှှားတယှ…အပေါငှးမှလာ ကိုယှ တို့ခံပဈထားမယှ…ကှှနတှောတှားတယှ…အပတစှဉှ ၁၅ က ဆေးဗိုလပှေါကစှ လေးေ ဆးထိုး အပကှိုငတှဲ့လကလှေးက လကနှကကှှီး ကိုယတှိုငပှဈနရပှေီ…
ရဲမေတွေလည်း အသေအကျေ ခံပစ်ဆဲ ကျည်နည်းနေပြီ အခြေနေမကောင်းတော့ဘူး ဒါကို ဗိုလ်စံ ကောင်းကောင်းသိတယ်….အိုင်ကွန်မှာ တစ်ခွန်းပဲ နောက်ဆုံးကြားလိုက်ရတယ် အကိုကြီးတို့ကိုရအောင်ထုတ်မယ်တဲ့သရဲသဘက်တွေအလား ( သူတို့ကိုယ်သူတို ့ကျည်မ တိုးသလို) အော်ဟစ်လိုက်လာတယ်….
၂၈၆ ကှ ၂၈၆ ကှ ၂၈၆ ဟေ့ ……..ဆေးအဖှဲ့တှေ ကယတှယှ…ရဲမတှေေ ထုတ တှ ယှ… ကှှနှေ တာှ တို့ဆကသှှယရှေးအဖှဲ့ရော ဆေးဗိုလလှေး ဆရာဝန လှေး သှေးနီတယှ…အသခေံပဈ တယှ…ကှှနတှောှ ပဈလှနှးလို့ ပှောငှးက နီပီး ရဲရဲတောကနှပေီ ၊ ဗိုလစှံက တော့ အောဟှဈပီး သူ့ ညီအဈကိုတှအတှကသှရေဲသ ဘကစှီးနဆေဲ မကှုံစ ဖူးဘူး ကှှနတှောတှို့DSA / TA / MA က ညီအကို သုံးဦး လကတှှဲညီခဲ့ကှတယှ…အရုဏ သှောကတှော့ ဗိုလစှံက အမိ နှ့ေ ပးေ တာ့တယှ…အကိုတို့၂ယောကခှှာတော့ ကှှနတှောှ ကာပဈပေးမယှ နောကကှ လိုကှ လာမယ သှှားတော့ သှားတော့ ….“ညီလေး ဂရုစိုက ပှါ နောှ….လေးစားပါ တယှ´´ ဗိုလစှံတို့ တဈ စုလုံး ကှှနတှောတှို့ကို အသခေံ ကာကှ ယှ ကှတယှ… ကာပဈတယှ…ဘေးကငှးရာ ရောကခှါနီးမှ ဆဲဆဲ
ဝုနှးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးရနသှူ့40 mm သံ ….တောတှောကှယှတှယှ ၊ တဈလောကလုံး ခဏ တိတသှှားတယှ…စှနရှဲ စှနရှဲ …..စှနရှဲ အသံကောငှးလား ´´“အကှောငှး ပှ နှ ………´´မထူးလာဘူး တိတနှဆေဲ“ဟှောငှ့တေ ပှနဖှှလကှေော …….´´“တော ကှ ´အိုငကှှနသှံ ကှားဖှတဝှငလှာတယှ“အဘ …..စှနရှဲကသှှား ပှီ´ ´“ ဟာာာာာာာာာာ ကှာာာာာာာာာာာာ´´တောကဈှ ´´( လကသှီးတငှးတငှးဆုပတှယှ အံကှိတတှယှ )
မျက်ရည်က ပေါက်ခနဲ ….ဗိုလ်စံ ကျနော်တို့ကို ရအောင်ထုတ် အသေခံ ကာကွယ်ရင်း တိုင်းပြည်အတွက် အသက်ပေးသွားခဲ့တယ် အဲဒါ အပါတ်စဉ် ၅၀ က လူမသိသူမသိ သူရဲကောင်းလေးဗျ ဗိုလ်မှူးရ ၊ ခု ကျွန်တော်သူ့အတွက် မျက်ရည်မခြောက်သေးဘူး ဗိုလ်မှူးက ထားခဲ့ပြန်ပြီ
တိုင်းပြည်အတွက် စွန့်လွှတ်သွားပြန်ပီ ….နိုဝင်ဘာလဟာကျွန်တော့်မွေးနေ့ ရှိတယ် အမြဲတမ်း ကံကောင်းမှုတွေပေးတဲ့ လ ၊ ဒီတစ်ခါတော့ တစ်လလုံး နဂါးခေါင်း ကျွန်တော့တ ည့် တည့်လှ ည့်တယ် ၊ သူရဲကောင်းတွေ စွန့်ခွာတယ် ……..စိတ်မကောင်းဘူး မကျေ ဘူး….တွေ့ဦးမယ်
ကျွန်တော်တိုးတိုးလေး ရေရွတ်တယ်….စိတ်ချကြပါ ကျန်တာ ကျွန်တော်တို့တာဝန် ထား လိုက် ဗိုလ်မှူးနဲ့ညီလေး နားကြပါတော့ ( ကောင်းမွန်စွာ )ညာလက်က ဖြတ်ခနဲ မြောက်တက် လာ တယ်…မျက်စိမှိတ်တယ်ပါးပြင်ပေါ်မှာ ပူခနဲ တချက် ?
အပတ်စဉ် ၄၅ မှ သူငယ်ချင်း ဗိုလ်မှူးဟိန်းသူနှင့် ၅၀ မှ ညီလေး ပြည့်ဖြိုးစံတို့အား အလေး ပြု လျက် m`D_S_A
အိမ်ရှင် အီဂျစ်နိုင်ငံံသူကို ၂ပွဲပြတ်ြ ဖင့် နိုင်လိုက်တဲ့ သက်ထားသူဇာ
ညီအစ်လိုရင်းလို ချစ်ခင်ရတဲ့ လူမင်းရဲ့ ရှုတင်ထိတကူးတကသွားကာသူရောင်း ချတဲ့ဝက်သားပေါင်းပို့ပေးခဲ့တဲ့စည် သူမောင် December 4, 2020
မတော်ရသေးတဲ့ ယောင်းမလောင်း လေး ရီရီပွင့်ဖြူရဲ့ စေတနာမေတ္တာ တွေကြောင့်မိသားစုတွေအားလုံးပျော် ရွှင်ခဲ့ရပုံကို ပြသလာတဲ့ နန္ဒာလှိုင် December 4, 2020
မိန်းကလေးချင်း ချစ်သူ ဖြစ်တာ ၃ နှစ် ရှိသွားပြီဖြစ်တဲ့ အဆိုတော် ဂေ ဂေးနဲ့ အလှမယ် ဆွေဇင်ထက် December 4, 2020
ချစ်သူကို လက်ထပ်ခွင့်တောင်းလိုက် ပြီဖြစ်တဲ့ အဆိုတော် ရဲနောင် December 4, 2020
ပရိသတ်အားပေးနားဆင်မှုအများဆုံးနဲ့ JOOX ရဲ့ Social Chart မှာ နံပါတ် (၁)နေရာကို သိမ်းပိုက်ထားတဲ့ ရွှေထူးနဲ့ ငွေမှုံ (ကဲကဲ)တို့ရဲ့ သီချင်း လေး December 4, 2020
မိတ်ကပ်တွေမလိမ်းထားဘဲနဲ့တောင်မျက်နှာလေးကဖြူဖွေးနုဖတ်နေပြီးကလေးလေးတစ်ယောက်လိုချစ်စရာကောင်းနေတဲ့ သရုပ်ဆောင်ပွင့် December 4, 2020
(၄၈)နှစ်ပြည့်သွားတဲ့ ခင်ပွန်းကိုခန့် နိုင် အတွက် သမီးလေးစံထိပ် ထားဦး နဲ့ အတူတူပေါင်းပြီး အမှတ်တရမွေး နေ့ ပွဲလေးပြုလုပ်ပေးခဲ့တဲ့ ခိုင်သင်း ကြည် December 4, 2020
ခင်ပွန်းသည် အကယ်ဒမီထူးချွန်ဆုရ ရှိခဲ့ စဥ်တုန်းက မိသားစုလေးအတွက် ဝမ်းသာပျော်ရွှင်ခဲ့ရတဲ့ အမှတ်တရ လေး တွေကို ချပြလာတဲ့ မျိုးမျိုးခိုင် December 4, 2020
သမီးလေးမွေးပြီး ဆေးရုံတက်နေတဲ့ အချိန်မှာ ငါးထောင်တန်တွေအပြည့် ပါတဲ့ပိုက်ဆံပန်းစည်းနဲ့ Surprise လုပ် ခံလိုက်ရလို့ ပျော်နေတဲ့အိအိတုန် December 4, 2020
ပုရိသအမျိုးသားတွေကိုရင်ခုန်သံမြန် ဆန်စေသူလေး သင်ဇာဝင့် ကျော် ရဲ့ ဒီ ကနေ့ကျရောက်တဲ့အသက် (၃၃)နှစ် ပြ ည့်မွေးနေ့ December 4, 2020